တရုတ်ကြီး အဟုတ်တီး ခံရတော့မည်လော….. knock-out | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » တရုတ်ကြီး အဟုတ်တီး ခံရတော့မည်လော….. knock-out
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Nov 27, 2011 in Opinions & Discussion, World News | 18 comments
ဩစတေးလျ ပါလီမန်အတွင်း သမ္မတအိုဘားမား ပြောကြားတဲ့ မိန့်ခွန်းတွင် ဒေသတွင်း အမေရိကန် ဩဇာသက်ရောက်မှုကို ဆန့်ကျင်နေသော နိုင်ငံများအား ပြင်းထန်သော သတိပေးချက် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ၌ တရုတ်နှင့် မြောက်ကိုရီးယားတို့ကို တိုက်ရိုက် ပစ်မှတ်ထားလိုက်သည်။
မရိန်းကမ်းတက် စစ်သည်များကို နှစ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး ပူးတွဲသဘောတူညီချက် စာချုပ်အရ ဩစတေးလျနိုင်ငံတွင် ဖြန့်ကျက်ထားမည်ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ကြေငြာအပြီး တရက်အကြာတွင် သမ္မတအိုဘားမားက “ ငါတို့ရဲ့ ဒေသတွင်း ရေရှည်အကျိုးစီးပွားက အမြဲတမ်း အခြေစိုက်စခန်းတည်ရှိဖို့ တောင်းဆိုနေတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ ပစိဖိတ်ဒေသရဲ့ အင်အားကြီး နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ငါတို့ ဒီနေရာမှာ ရှိနေရမယ်။”
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရေတပ်သင်္ဘော အုပ်စုတစု - FNG news
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလျှင်မြန်ဆုံးအရှိန်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပြီး ကမ္ဘာစီးပွားရေးရဲ့ တဝက်ကျော် အခြေပြုရာ အာရှဒေသသည် အရေးကြီးဆုံး ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမဲ့ အမေရိကန် ပြည်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင်၊ အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးရေးမှာ အခရာကျတယ်။ နြူကလီးယာလက်နက် အင်အားကြီးနိုင်ငံ အများဆုံးရှိပြီး ကမ္ဘာ့လူဦးရေတဝက်ကျော် မှီတင်းနေထိုင်တဲ့ ဒီဒေသသည် လာမည့်ရာစုနှစ်ကာလရဲ့ ပဋိပက္ခ သို့မဟုတ် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အဆုံးအဖြတ် ပေးပါလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့် သမ္မတတယောက်အနေနဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကို ပစိဖိတ်ဒေသအတွက် လေးလေးနက်နက် ချမှတ်လိုက်တယ်။ ဒေသတွင်းရေးရာများနဲ့ အနာဂတ်ပုံဖော်ရေးကို ပိုကြီးမားပြီး ရေရှည် ဆက်ဆံရေးနဲ့ ဆောင်ရွက်ရာမှာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသည် ခိုင်မာတဲ့မူဝါဒ ဆုပ်ကိုင်ပြီး မဟာမိတ်များ၊ မိတ်ဆွေနိုင်ငံများနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းသွားပါမယ်။
စက်ပျက်..အဲ.. စက်ရပ်နားနေသော တရုတ်ရေတပ်မတော်ကြီး
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ပြောရာမှာတော့ “ ၂၁ရာစုရဲ့ အာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ ရာနှုန်းပြည့် ပက်သက်ဆက်နွယ်နေမှာ ဖြစ်တယ်။”
ကြောင်ကြီးကတော့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ တရုတ်ထီး တေပါစေ၊ တရုတ်မ နေပါစေ မရှိပါဘူး။ အားလုံးဟာ အတူတူပါပဲ။ တရုတ်ထီးတကျပ်ဆို တရုတ်မလည်း တဒေါ်လာ ရရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်မကြိုက်သူ ကြောင်ကြီး :cool:
Obama Warns China: ‘The United States Is A Pacific Power, And We Are Here To Stay’
Zeke Miller|November 16, 2011|
A day after announcing that the United States will deploy Marines to Australia as part ofadefense partnership, Obama said: “Our enduring interests in the region demand our enduring presence in this region. The United States isaPacific power, and we are here to stay.”
“Here, we see the future. As the world’s fastest-growing region—and home to more than half the global economy—Asia is critical to achieving my highest priority: creating jobs and opportunity for the American people. With most of the world’s nuclear powers and nearly half of humanity, this region will largely define whether the century ahead will be marked by conflict or cooperation, needless suffering or human progress.
As President, I’ve therefore madeadeliberate and strategic decision—asaPacific nation, the United States will playalarger and long-term role in shaping this region and its future, by upholding core principles and in close partnership with allies and friends.”
He summed it up: “In the Asia Pacific in the 21st century, the United States of America is all in. ”
ဥရောပက ကောင်တွေရဲ့ အီးယူ(EU-European Union) ကို နာဖတာ(NAFTA-North American Free Trade Agreement)
ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့ 6.5 % လောက်ဘဲရှိတဲ့ (457 မီလီယံ) နာဖတာဟာ ကမ္ဘာချမ်းသာမှုရဲ့ 27 % ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့
ကမ္ဘာငွေကြေးရံပုံငွေ IMF အိုင်အမ်အက်ဖ်ဒေတာကပြောတယ်။
ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့ 19.2% ရှိနေတဲ့ တရုတ်ကတော့ (အင်း လူ ၅ယောက်မှာ တရုတ် တယောက်နီးပါးနော်)
ကမ္ဘာချမ်းသာမှုရဲ့ 9% ချမ်းသာပါတယ်တဲ့။(ကမ္ဘာချမ်းသာမှုရဲ့ ၁၀ ပုံတပုံလို့ဘဲ သာသာထိုးထိုးထားလိုက်ပါအုန်း။)
အမေရိကန်တနိုင်ငံထဲနဲ့ ပြောရရင် ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့ 4.48%%သာရှိနေတဲ့ အန်ကယ်ဆမ်ပါ။
(လူ အယောက် ၂၀ မှာ တ ယောက်နီးပါး)
ကမ္ဘာချမ်းသာမှုရဲ့ 23% ချမ်းသာပါတယ်။
(ကမ္ဘာချမ်းသာမှုရဲ့ ၅ပုံ တပုံကျော် ချမ်းသာပါတယ်။)
စစ်ရေးမှာဆိုလဲယူအက်စ်က Modernized Aircraft Carrier ၁၂ စီးလို့ပြောထားပြီး တရုတ်က ၁ စီးလို့ပြောထားပြန်ပါတယ်။
ရေရှည်မှာ ပို့ကုန်မှီခိုစီးပွါးရေးဖြစ်နေလေတော့ အာရှဈေးကွက်ကိုမှီထားရတဲ့ ယူအက်စ်ကြီး တရုတ်ဝင်သွားမှာကို
၁၉၈၅ နဲ့၁၉၉၀ ကြားထဲက အာရှရဲ့ ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားပုံကြီး (Trade Diversion) ဟာ
တကယ်ကို (Tragedy) ရင်နာစရာဇာတ်လမ်းကြီးပါ။ ဂျပန်ကိုဦးတည် နေတဲ့ အာရှရဲ့ အင်အားအကြီးဆုံး ကျား၊နဂါးတွေရဲ့
ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကြီးဟာ မျက်စေ့ရှေ့မှာတင်ဘဲ ဝယ်လိုအားကောင်းကောင်း (အကြွေးကာဒ်စံနစ်အရှိန်အဟုန်
မြှင့်)နဲ့ ယူအက်စ်ရဲ့ ထိုးစစ်နဲ့ နိပွန်ကြီး နောက်ကောက်ကျခဲ့တာပါ။ Japan နောက် ၁၀နှစ်မခံပါဘူး၊
နဂိုကလဲ ကိုယ်ခံအားကျဆင်း စပြုလာပြီ ဖြစ်တဲ့ “ဗျူရိုကရိုစီ နိပွန်” တကယ်ကို ပြာသွားခဲ့ရပါတယ်။
ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း တခုရဲ့ အပြောင်းအလဲ ဟာ “ကံကြမ္မာဟာမင်းဘဲ အချစ်ရယ်” လို့ ဆိုရမှာပါ။
အဲဒီ အရေးကို အန်ကယ်ဆမ် ကြောက်လှပါတယ်။ သူဖော်ခဲ့တဲ့ဆေးပါ။
ဆိုဗီယက်တို့မရှိတဲ့ နောက် ဥရောပရဲ့အီးအီးစီ ကြီးရဲ့ အရှိန်အဝါကို တိုက်ခိုက်လို့အနောက်ဖက်မှာ အဆင်ပြေခဲ့ပြီ။
အာရှရဲ့ ဦးဆောင်ငန်းပျံ( Leading Goose)ဖြစ်တဲ့ ဂျပန်၊နိပွန်ရဲ့အာရှဈေးကွက်ရှယ်ယာကိုလဲ ရ အောင်ယူခဲ့ပြီ။
တရုတ်ကို ငွေအားနဲ့ဖိဘို့ကြိုးစားချင်ပေမဲ့ မကာအိုနဲ့ ဟောင်ကောင်ကသထိန်းတွေက
“ငွေကိုမလိုဈေးကွက်သာလိုသည်”ဆိုလို့ မထိုးဖောက်နိုင်ဘဲ ပိုဈေးသက်သာတဲ့ ကိုတရုတ်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းဝယ်ရလေတော့
ကုန်သွယ်ရေးလိုငွေပြပြီး အကြွေးတင်ပြီ ကိုတရုတ်ဆီမှာ။
အင်း ဒီအတိုင်းဆို ရေရှည်မှာ ခက်ရချီရဲ့ လို့တွေးမှာပေါ့။
စစ်စရိတ်ထောင်းလို့နဲ့စက္ကူငွေကြေး( Paper Money & Credit Card ) လည်ပါတ်မှုရဲ့ ပကတိငွေသား အားမမျှတော့တဲ့ ရောဂါစွဲနေတဲ့အချိန်မှာ…………..
ကုန်သွယ်ရေးစစ်ကိုပါ ရှုံးရမလိုဖြစ်နေတော့ လန့်လာပြီပေါ့။
အာရှနဲ့ ကုန်သွယ်စဉ်က သားပေးသမီးယူခဲ့တာ ကိုယ်ကသာခဲ့တယ်။
အာရှကကောင်တွေထက် ကုန်သွယ်ရေးပိုငွေပြီခဲ့တာချည်း၊ အကြွေးတင်ခဲ့ဘူးရိုးထုံးစံမရှိခဲ့တာလေ။
မြန်မာပြည်လို စာရင်းမသွင်းတဲ့ နိုင်ငံကိုတောင် စ လုံးကတဆင့် ဘရဲန်းဒတ်နဲ့ ကစ်ခဲ့သေးတာ။
ဟားဟား ယူအက်စ် မိဒ်လေ။
အာရှသားများသည် “ငကြွားများဖြစ်သည်၊ အမေရိကန်မီလီယမ်နဲယ်များပင်မသုံးသောဘရဲန်းဒါတ်များကိုသုံးလေသည်”
လို့ မိချောင်းမျက်နှာနဲ့အာရှသားများဆိုတဲ့ သရော်စာတပုဒ်မှာဖတ်ဖူးတယ်။
ဒီနေ့ တရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေ တွေ့တိုင်းသတိထားကြည့်တော့ သူတို့သုံးနေတာ ယူအက်စ်မိဒ်
အင်း…အဲဒီ တော့ အကောင်းဆုံးကမ္ဘာစီးပွါးရေးတက္ကသိုလ်များစုဝေးရာ အမေရိကန်ကြီး၊ နာမည်ကျော်နိုဘယ်ဆုရှင်စီး
ပွါးရေးပညာရှင်များ၊အိုင်တီပညာရှင်များစုဝေးရာ နိုင်ငံကြီး သူများထက်ပိုသိတော့ ပိုခံရခက်သည်ပေါ့။
မေးပါပြီ အရှင်ဘုရား။(အဲ လေရောကုန်ပြီ)
ဗ ဗလ အင်အားပြ။
ဘယ် ခြောက်ကာ ညာ ကိုလှမ်းမယ်ပေါ့။
မင်းတို့ မှာညူ ရှိလား။အဖြူ ရှိလား။
ဟင်း ..နော် တွေ့ လား ဒီမှာ တစ်ပူး ဆိုပြီး ဖြဲခြောက်စံနစ် နဲ့ “ဟစ်” လိုက်တာဘဲ နေမှာပါ မင်းကြီးများ။
ကဲ …ဒီတပါတ်တော့ ဒီလောက်ပါဘဲ။
မောတယ် ဒင်းတို့တွေ။အင်း.. နဲနဲ ဟ တာနဲ့ ဆွဲစိ ဖို့မြန်မာပြည်ကိုပြေးအုန်းမယ်။
တရုတ် ကုလားကို အဟုတ်ကစားလို့ရတဲ့ မြန်မာပြည် လာထား ဆွဲတက်လေးတဲ့။
ဦးဦးကြောင် ကျန်တာတွေတော့ နားလည်သလိုလိုပါ ..
ဆရာသစ်ကတော့ ဗုံတုံတုံလုပ်တာပါတဲ့ …
“တရုပ်” မကြိုက်သော ကြောင်ကြီး ဟုရေးထားတာပါလား ..
“တရုပ်မ” ကြိုက်သော ကြောင်ကြီးဟု ဆိုလိုပါသလား …
တော်ပါဘီ …လူကြီးစကားဝိုင်းထဲ ပဲကြီးလှော် ၀င်မနှိုက်တော့ဘာဘူး…
အဟမ်းအဟမ်း (ချောင်းဟန့်နေတာနဲ့ ပြောချင်တာပျောက်သွားတယ်ဗျို့)။
တရုတ်ဘက်က ပြန်ရေးမယ့်သူတွေ ရှိရင် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော..။
ဒါတားရို့ အရွယ်ဝတ် ဟုတ်ဝူး…
တားတားက အန်တီ မမအရွယ်ထဲကရွေးချို …
Four Young Dan actresses ဖြစ်တဲ့ Zhang Ziyi, Zhou Xun, Xu Jinglei , Zhao Wei
ကီးမြင့်တယ် ဂီဂီရယ် လျော့ပါဦးဆို …. အသက်သိပ်မကွာတဲ့ .
Fan Bingbing ပါခည …
ညလေး အရွယ်ထဲကချို …. ဟုတ် ၁ယောက်ပဲ ရွေးပါ့မယ်…
Crystal Liu လေးပါပဲဂျာ..
၀ါသနာရှင် ထင်တွားမှာ ချိုးရို့ တော်သေးဘီ …
မောင်ရင့်ပုံတွေကလည်းကွယ် မျက်နှာပဲ ကောင်းကောင်းမြင်ရဒယ်..
ဥကြောင်ရ မချိလို့ပါ .. ချိရင် ရှဲပါဒယ်…ဟဲဟဲ
ဥကြောင်တို့ဆီမှာ တက္ကသီလာ လာတက်နေဒယ်
အခု စိတ်ညစ်နေဒလာက တူကလေးနဲ့ တွေ့လို့ အိုင်လက်ဖြူ ပြောတဲ့အခါ
အင်္ဂလိပ်လို ပြောရမှာလား တီလုပ်လို မှုတ်ရမှာလား …
ဂျာပွန်လိုပဲ တော့ရမှာလား ဝေခွဲမရ၀ူးဗျို့..
တို့ ဂိုဏ်းချုပ် ဦးကြောင် နဲ့ 
မောင်ပေ တို့ အတွက်ကတော့
ဒီလောက်နဲ့ မပြည့်စုံသေးဘူး ကွဲ့ 
ဂေါင်းလီမဟုတ်ပါ ဦးဘလက် ..
ကုံးလီ လို့ အသံထွက်ရပါတယ် …
အော် ဂီဂီ ရယ်။
သူ့အရွယ်နဲ့ သူ့အကြိုက် တူပါ့မလားကွယ်။ ခက်လိုက်တာ။
မောင်ရင် ပြောတာလေးလည်း ဘဘဘလက်က
အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးဂေါင်းလီကြီးတောင် ဖနှောင့်နဲ့ ပေါက်ရမလို
ဖြစ် သွား ပါ တယ် ကွယ် ။
အဟီး …အဲ့လာမိုးလေး လိုက်ရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ပဲ …အရိုးထုတ်ရတော့မယ်ထင်ပါ့..
Zhou Xun နဲ့ တာဒါလေးတော့ တွေ့ခဲ့ဖူးပါရဲ့ (ရန်ကုန်မှာ)
မေးစေ့လေး ဆိုင်ကယ်ဖင်ထိုင်ခုံလေးလိုကောက်တာ …
အသံလေး သြနေတာကအစ ကို တူပါတယ်ခညား…
(သိပ်ဒီတေးရေးတော့ဝူး ..အနှီချာတိတ်မ ရွာထဲရှိရင်
လွဲချက်ကနာ ပါတယ်ခည …. ဘ၀ချင်းကခြားတော့ …ဟင့်
အဲ့တုန်းက သူက အမျိုးသမီး လစဉ်သုံးပစ္စည်း
sales manager မလေးပါခညား …
သေရော …ဂီ ဘယ်မျက်ခွက်နဲ့ သူ့ ကန်ပနီ သွားငန်းရပါ့ ….
ကျွန်တော် နားမလည်တာက တရုတ် တစ်ကျပ်ဆို အဲ.တာဘာငွေလဲဗျ ဟိဟိမြန်မာငွေတော.မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော် တရုတ်မကြိုက်တဲ. cryingsoul
နာ့သိတဲ့ တရုတ်မတွေကတော့ လန်းတယ်ဗျ။ အဲဗား ကွက်တားလေးနဲ့ တစ်ကိုင်းကြိုးလေးတွေနဲ့ကြည့်ဘဲ။
ပြောရင်းနဲ့ သရေတောင်ကြလာပြီ ဂလု :lol
ဦးဖော ကြီးရွာထဲ မှာ ပိတ်မိနေတုန်း ပြောထားပေါ့ ကွာ .. ပြန်လာမှ တိုင်ပြောမယ်။